အအေးလှည့်ကွိုင် (CRC အပြည့်အဝ Hard / လျော့ပါးစေခြင်း)
အအေးသံမဏိကွိုင် / စာရွက်
နှစ်စဉ်စွမ်းရည်: 600,000 တန်ချိန်
သွပ်အပေါ်ယံပိုင်း: 20ဆ / m2-275 ဂရမ် / m2
အမျိုးအစားများ: အားလုံး, CRC အပြည့်အဝ
အအေးခံထားသောစာရွက် ：ကုန်ကြမ်းများအဖြစ်အရည်အသွေးမြင့်ပူလိပ်ကိုကောက်ယူခြင်းဖြင့်ဤနည်းအတိုင်းပြုလုပ်သည်. အဆင့်ပေါင်းများစွာကိုအေးသောခုနကကြိတ်စက်၌လှိမ့်ခြင်းဖြင့်ပုံပျက်စေသည်, လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အသားကျက်စေခြင်းအပြင်အရေပြားဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းစသည်.
ထုတ်ကုန်အမည် အအေးသံမဏိကွိုင် / စာရွက်
စံ အက်ဆစ်, AISI, JIS, GB, FROM မှ
မူလနေရာ တီယန်ကျင်းတရုတ် (ပြည်မကြီး)
လက်မှတ် ISO 9001, ကြိတ်စာမေးပွဲလက်မှတ်
နည်းပညာကုသမှု Rolled အအေး
မျက်နှာပြင် Finish အဓိပ္ပာယ် လျှောက်လွှာ
2ခ အဲဒါတွေပြီးသွားပြီ, အအေးခံပြီးနောက်, အပူကုသမှုဖြင့်, pickling (သို့) အခြားညီမျှသောကုသမှုနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင့်လျော်သောတောက်ပမှုအတွက်အအေးခံခြင်းဖြင့်အအေးခံခြင်း. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ, စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း, ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ.
ဘီအေဘွဲ့ အအေးခံပြီးနောက်တောက်ပသောအပူကုသမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်. မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း.
NO.3 JIS R6001 တွင်ဖော်ပြထားသည့် No.100 မှ No.120 abrasives ဖြင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်ပြီးသည်. မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း.
NO.4 JIS R6001 တွင်ဖော်ပြထားသည့် No.150 မှ No.180 abrasives ဖြင့်ပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်ပြီးသည်. မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ.
ဇ သင့်တော်သောကောက်နှံအရွယ်အစားကို abrasive သုံး၍ စဉ်ဆက်မပြတ် polishing streaks များပြုလုပ်ရန်ပြီးစီးသည်. အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း.
NO.1 မျက်နှာပြင်ကိုအပူကုသမှုနှင့်အချဉ်ဖောက်ခြင်း (သို့) လှိမ့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့်ပြီးစီးသည်. ဓာတုပညာရှင်, ပိုက်
မျက်နှာပြင် : လှပသောငွေ, အဆင့်မြင့်မြင့် ;
မြင့်မားသောတံဆိပ်ခေါင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အိုမင်းမှုမရှိခြင်း, အထွက်နှုန်းနိမ့်သည် .
galvanizing အတွက် annealing equipment များနှင့် galvanizing equipment များ;
စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန်မလိုသော panel တစ်ခု;
ပေးပါ & GL & PPGI ;
သံဖြူအဖြစ်လည်းကောင်း (သံပြား)：Frolstein အားဖြင့်မပျော်ဝင်နိုင်သော anode သံဖြူကို electroplating process ဖြင့်ပြုလုပ်သည် ;
ဘုံအမျိုးအစား: CDCM – SPCC နှင့် SPCD、SPCE、ST12、ST13、ST14、BLC、BLD、BUSD、BUFD、BSUFD, စသည်တို့
အရောင်းအ ၀ ယ်အဖြစ်တည်ဆောက်သည်, မော်တော်ကား, လျှပ်စစ်အိမ်သုံးပစ္စည်းများ, အသွားအလာ, စသည်တို့
မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး, လျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်များ, စတော့ရှယ်ယာ, လေကြောင်း, တိကျသောတူရိယာများ, စည်သွတ်အစားအစာ
သံဗုံရိုက်နှိပ်သည်, ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ, စက်ဘီးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ
hot-dip galvanizing line အတွက်ကုန်ကြမ်းဖြစ်ခြင်း.
organic coated steel ပြားထုတ်လုပ်မှုသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
မြင့်မားသောအတိုင်းအတာတိကျမှု→လျှပ်စစ်သံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများ, နက်ရှိုင်းသောပုံဆွဲဂုဏ်သတ္တိများ, စသည်တို့.